Orinasa fantsom-bokotra tsy misy residu - Mpanamboatra fantsom-bokatra tsy misy sisa tavela any Shina, mpamatsy
Fantsona fantsona, antsoina koa hoe kasety gana, dia kasety mora tohina amin'ny tsindry tohanan'ny lamba na soritra, matetika mifono polyethylene. Misy karazana fananganana isan-karazany amin'ny fampiasana lamosina sy adhesives isan-karazany, ary ny teny hoe "duct tape" dia matetika ampiasaina hilazana karazana kasety lamba samy hafa misy tanjona samihafa.
Fantsona fantsona, antsoina koa hoe kasety gana, dia kasety mora tohina amin'ny tsindry tohanan'ny lamba na soritra, matetika mifono polyethylene. Misy karazana fananganana isan-karazany amin'ny fampiasana lamosina sy adhesives isan-karazany, ary ny teny hoe "duct tape" dia matetika ampiasaina hilazana karazana kasety lamba samy hafa misy tanjona samihafa. Ny fantsom-pandrefesana dia matetika mifangaro amin'ny kasety gaffer (izay natao tsy hitaratra ary esorina madio, tsy toy ny fantsona fantsona). Ny fiovana hafa dia ny fantsom-panafody mahatohitra hafanana (fa tsy lamba) ilaina amin'ny famehezana ny fantsom-panafana sy ny fantsom-pamokarana, vokarina satria tsy mandeha haingana ny fantsona mahazatra rehefa ampiasaina amin'ny fantsom-panafana. Ny fantsona fantsona dia volondavenona volondavenna amin'ny ankapobeny, saingy misy amin'ny loko hafa ary na dia ny pirinty aza
Nandritra ny Ady Lehibe Faharoa, Revolite (fizarana an'i Johnson sy Johnson) dia namolavola kasety vita amin'ny adiresy miorina amin'ny fingotra apetaka amin'ny fanohanana lamba ganagana mateza. Ity horonam-peo ity dia nanohitra ny rano ary nampiasaina ho toy ny famehezana ireo tranga misy bala nandritra izany fotoana izany.
Ny "duck tape" dia voarakitra ao amin'ny Oxford English Dictionary ho efa niasa hatramin'ny 1899; "duct tape" (nofaritana ho "fanovan'ny kasety gana taloha") hatramin'ny 1965.